Cuntada keega WASC (labeen dhanaan oo yicib cad) asal ah - Keega
Cuntada Cake ee WASC
Cunto-karinta keegga 'WASC cake' waa isku-darka keegga la duubay oo ay kuwa badan oo dubayaasha ah u isticmaalaan sida aan loo-guuldareysan karinta keega cad
Cuntadani waa keeg jilicsan oo qoyan oo ku habboon keega arooska cad. Waa adag tahay in la isku toosiyo oo la daboolo si quruxsan laakiin haddii aad raadineyso wax aad xardho, waxaad u baahan kartaa inaad iskudaydayda karinta keega cad .
Muxuu WASC u taagan yahay?
WASC waxay u taagan tahay keega yicibta cad ee cad. Cunto karinta 'WASC cake' ayaa la isticmaali jiray sanado badan waxaana la waafajiyay marar badan. Cuntadan ayaan ka sameeyay sanado badan ka hor markii aan dib u akhriyay dunta Cake Dhexe intaanan aqoon sida loo dubo keeg ka xoq. Waxyaabaha qosolka leh waa adoo ku daraya dhammaan walxahan, waxaad asal ahaan ka sameyneysaa keeg ka xoq! Waxa kaliya ee aadan u baahnayn inaad ka walwasho ayaa ah habka isku dhafka oo marka hore khiyaano noqon kara laakiin si fudud ugu filan in lagu barto dhowr isku day.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan WASC waa inay fududahay in la sameeyo, waa cadaalad qalad-cadeyn ah oo dhadhan fiican qurux badan waana hab fudud oo lagu sameeyo dhadhanka keegga sanduuq badan sida karinta keega xoq.
Cake WASC waa keeg jilicsan oo u baahan in si buuxda loo qaboojiyo ka hor intaadan baraf ku dhicin subag macaan .
Waa maxay iskudhafka sanduuqa ugu fiican ee loo isticmaalo WASC?
Waan ka door biday Duncan Hines isku darka keega cad . Duncan Hines, feker ahaanteyda, wuxuu leeyahay isku darka sanduuqa dhadhanka ugu fiican ee lagu bilaabi karo.
sida loo ilaaliyo strawberries cusub muddo dheer
Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida loo sameeyo keegaaga ugu horeeya , hubi casharradayda oo buuxda. Casharradan, waxaan ku tusayaa oo kaliya sida loo sameeyo cuntadan keega ah ee loo yaqaan 'WASC cake', waxaan sidoo kale ku tusayaa sida loo jaro lakabyada keegaaga, loo buuxiyo keegaaga si siman buttercream loona abuuro si habsami leh
Casharro kale oo waxtar kuu yeelan kara
Sida loo helo geesaha buttercream fiiqan
Sida loo daboolo keeg ku jira fondant
Isku darka keegga la dhajiyay oo ay sifiican u adeegsadaan kuwa wax dubaya aduunka oo dhan oo soo saara keeg cad oo macaan oo u dhadhamiya sida xoq. Cuntadani waxay ka dhigeysaa seddex 6'x2 'wareegyo keeg ah ama labo wareeg ah oo 8'x2' ah Waqtiga Diyaarinta:10 daqiiqado Waqtiga karinta:30 daqiiqado Wadarta Waqtiga:40 daqiiqado Kalori:747kcal
▢1 sanduuqa (1 sanduuqa) isku darka keega cad Waxaan jeclahay hines duncan
▢5 oz (142 g) Burka AP 1 koob (lagu kariyey koob, looma qaadin)
▢7 oz (198 g) sonkorta granulated 1 koob
▢1/4 tsp cusbo
▢9 oz (255 g) labeen dhanaan 1 koob oo kuleylka qolka ah
▢8 oz (227 g) caano 1 koob heerkulka qolka
▢4 weyn (4) ukun cad heerkulka qolka
▢1 tsp (1 tsp) soo saar yicib
Tilmaamaha WASC CAKE
Tilmaamaha loogu talagalay keeggan waa kuwo aad u fudud. Asal ahaan, dhammaan walxaha ku rid baaquli kuna qas xawaaraha dhexdhexaadka ah 2 daqiiqo! Voila! Dufanka keega waa diyaar. Ku shub baytari laba diyaaradood oo '8' ah oo ku kari ilaa 350ºF 30-40 daqiiqo ama ilaa cadayga la galiyay uu ka soo baxo nadiif. Waa caadi in la dubo keegaaga waqti dheer haddii aad isticmaaleysid digsiyada waaweyn.
Ha ka welwelin mid ka mid ah maaddooyinka ku yaal dhabarka sanduuqa, kaliya isticmaal maaddooyinka ku taxan habka cuntada. Cuntadani waxay ka dhigeysaa dufan ku filan seddex '6'x2' keega ama laba keega 8'x2 '(wareega). Cuntadani waxay ka dhigeysaa 40 koob oo buskud ah oo leh qiyaastii 1.25 wiqiyadood oo qasacad ah koobkii keegga ah. Waxaad ku beddeli kartaa 4 ukun cadaan ah seddex ukun oo dhan haddii aad rabto
U adeegida:1g|Kalori:747kcal(37%)|Kaarboohaydraytyada:120g(40%)|Protein:8g(16%)|Dufan:26g(40%)|Dufan Dufan:shan iyo tobang(75%)|Kalastarol:60mg(labaatan%)|Sodium:895mg(37%)|Kaliumperyamper:162mg(5%)|Fiber:1g(4%)|Sonkor:70g(78%)|Vitamin A:710IU(14%)|Vitamin C:0.3mg|Kaalshiyam:239mg(24%)|Bir:2.7mg(shan iyo toban%)
buuxinta miiska miro guduudka iyadoo la isticmaalayo fersken qasacadaysan
sida looga xanaaqo shukulaatada microwave-ka
sida loo sameeyo ubaxyo shukulaato ah oo lagu daydo
sida loo sameeyo beenta ciridka oo aan lahayn jello
karinta keega shukulaatada cufan ee xardho